Abaalmarinta “Man of The Match” Ee Premier League Oo Laacibiinta Muslimiinta Ah La Siinayo Cabitaan Aan Qamri Ahayn - jornalizem
Abaalmarinta “Man of The Match” Ee Premier League Oo Laacibiinta Muslimiinta Ah La Siinayo Cabitaan Aan Qamri Ahayn
Abaalmarinta Premier League ee loo yaqaan Man of The Match ayaa waxaa la siiyaa laacibka ku guuleysta ciyaartaas dhalo qamri ah oo weyn marka ay ciyaaryahanada galaan meelaha loogu talogalay inay sidoo kale saxaafada kula hadlaan.
Hase yeeshee waxaa dhacday in ciyaaryahanada Muslimiinta ah inay diidaan dhaladaas qamriga ah balse waxa uu haatan bilaabayaa xiriirka kubbada cagta ee Ingiriiska in abaalmarintaas loogu bedelo cabitaan caadi ah oo laga keenay Bariga Dhexe.
Laga bilaabo laacibkii Muslim ah oo abaalmarintaas hela waxaa lagu abaalmarin doonaa cabitaanka la yiraahdo waard.
Horaantii sanadkan ayaa shirkada bixisa abaalmarinta oo la yiraahdo Barclays waxa ay ku fikirtey inay wada joojiso kadib markii laacibka kooxda Man City Yaya Toure uu diidey abaalmarinta iyadoo si toos ah taleefishinada looga dawanayo waxana uu u sheegay saaxibkii oo ay u wada ciyaaraan City : ‘Ma cabo Qamriga waayo Muslim ayaan ahay ee adiga qaado.’”
Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa sidoo kale weeraryahanka Newcastle Damba Ba waxa uu diidey in uu u gudbiyo oo uu siiyo dhaladii qamriga ahayd Jonas Gutierrez oo loo aqoonsaday Man of the Match ee kulankaas.
Ba, ayaa marka uu u dabaaldegayo goolasha uu dhaliyo waxa uu u sujuudaa Alle waxana uu kamid yahay afar ciyaaryahan oo Muslim ah oo u wada ciyaarta kooxda Newcastle.
Saddexda kale ayaa kala ah Papiss Cisse,Leon Best iyo Hatem Ben Arfa. Ciyaaryahanada Muslimka ah ee kooxda Manchester City ayaa waxaa ka mid ah Yaya Toure iyo walaalkii Kolo, Edin Dzeko iyo Samir Nasri.
Afhayeen u hadlay Premier League ayaa yiri: ‘Waxaanu leenahay ciyaaryahano adduunka oo dhan ka kala yimid adduunka oo idilna laga daawado.